Wariye lagu xiray Baladweyne | KEYDMEDIA ONLINE
Wariye lagu xiray Baladweyne
Wariye ka tirsan howl-wadeenada Raadiyo Hiiraanweyn iyo dhallinyaro kale ayaa lagu xiray saldhigga degmada Baladweyne ee Hiiraan.
BALADWEYNE, Soomaaliya - Saddex ruux oo mid kamida yahay Wariye Xasan Maxamed Goosaar oo ka mid ah howl-wadeenadda Raadiyo Hiiraanweyn, iyo laba ruux oo dhalinyaro ah ayaa lagu xiray xarunta gobolka Hiiraan ee Baladweyne.
Dhallinyarada ayaa lagu soo eedeeyay in at wadeen shirar looga soo horjeeday maamulka Hirshabeelle kuwaasoo qaban-qaabo xoog leh ugu jiray sidii loo qaban lahaa isku soo baxa! Dhallinyarada ayaa lagu kala magacaabaa Dr. Guure Cabdi iyo Cabdiraxmaan dhegaweyne.
Laamaha Amniga ee Hirshabeelle ayaa ka war helay inay warren dhallinyaradan abaabul ku aadan banaanbax looga soo horjeedo Maamulka Hirshabeelle, waxana lagu xiray Saldhiga Booliska degmada Beledweyne.
Bulshada iyo siyaasiyiinta ku dhaqan Baladweyne ayaa si aada uga soo hor jeeda maamulka Hirshabeelle, waxayna horay udiideen in uu yimaado magaalada Baladweyne Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe oo intii la doortay aan marnaba cag soo dhigin Baladweyne!
Inkastoo wasiirka arrimaha gudaha, federaalka iyo dib-u-heshiisiinta dowladda Soomaaliya Mukhtaar iyo madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Daba-geed ay isku dayeen in ay ka dhaadhiciyaan in la qanciyo bulshada Baladweyne ayaa haddama ku guul darreystay.